यौन सम्बन्धलाई कसरी आनन्दित र स्मरणीय बनाउने ? जान्नुहोस १० टिप्स - Kendrabindu Nepal Online News
काठमाडौं । यौन एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यसलाई कसैले रोकेर रोकिने वा छेकेर छेकिने कुरा होईन् । यो त प्रकृतिले दिएको कुरा हो । अर्को कुरा यौन अति गोप्य रुपमा गरिने महत्वूर्ण चिज हो । यौन लिएर हाम्रो जस्तो समाजमा धेरै खुलेर कुरा गरिदैंन । तर पश्चिमा राष्ट्रहरुमा यसलाई सामान्य रुपमा लिईन्छ ।
कसैले विवाहपछि सेक्स गर्छन् भने कसैले विवाहअघि नै गर्छन् । यौन जीवनका बारेमा हामीमध्ये कति भ्रममा रहेका पनि हुन्छौं । यौन सम्बन्धलाई लिएर हामीमा केही कौतुहल हुनु पनि नकारात्मक कुरा होइन । विवाहको उमेर पुगेकाहरु र विवाहको तयारीमा रहेकाहरुलाई विवाहको पहिलो रात आफू पूरै सफल हुन सकिन्छ कि सकिँदैन, आफ्नो पार्टनरलाई सन्तुष्ट पार्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर चिन्ता हुने गर्छ । विवाहको रातको विषयलाई लिएर कतिपय मानिसहरु नर्भस पनि हुने गर्छन् ।
कस्तो महसुस हुन्छ के यो सुखद् अनुभव हुन्छ भन्ने खालका प्रश्नहरुले दिमागमा डेरा जमाउन पनि सक्छ । कतिपय अवस्थामा त यस्तो पनि हुन्छ कि सेक्स दुःखद् र पीडादायक हुन्छ भन्ने भ्रम पालेर बसेका जोडी पनि हुन्छन् र उनीहरुलाई सेक्स कसरी सुरु गर्ने भन्नेबारे पनि थाहा हुँदैन । कतै तपाईंलाई पनि यस्तै समस्याले सताएको त छैन ? त्यसो हो भने यस्तो टिप्स अपनाए तपाईको यौन जीवन सुखद र रोचक बन्न सक्छ ।
१. तपाईं आफ्नो विवाहको पहिलो रात यादगार र आरामदायक बनाउन चाहनुहुन्छ भने सुरुवात पनि बिस्तार बिस्तारै गर्नुहोस् । आफ्नो पार्टनरसँग खुलेर कुरा गर्नुहोस् । रमाइला कुराकानीबाट सुरुवात गर्नुहोस् र केही समय एकअर्काको साथमा रमाउनुहोस् । फेरि बिस्तारै चुम्बन र अधरपानतर्फ अगाडि बढ्नुहोस् ।